Iingcebiso ezintlanu eziPhambili zokwakha isiCwangciso soBume beNkokeli | Martech Zone
Iingcebiso ezintlanu eziPhambili zokwakha isiCwangciso soBume beNkokeli
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2020 NgoMgqibelo, Disemba 12, 2020 IGurpreet Purewal
Ubhubhane weCovid-19 ubonakalisile indlela ekulula ngayo ukwakha- kunye nokutshabalalisa uphawu. Ewe kunjalo, kanye le ndlela yokunxibelelana kweempawu ziyatshintsha. Imvakalelo ibisoloko ingumqhubi ophambili ekuthathweni kwezigqibo, kodwa kunjalo njani Iimpawu ziyaqhagamshela kunye nabaphulaphuli bazo eziya kuthi zimisele impumelelo okanye ukusilela kwilizwe lasemva koCovid.
Phantse isiqingatha sabenzi bezigqibo bathi umxholo wobunkokeli ocinga ngombutho unegalelo ngqo kwimikhwa yabo yokuthenga, okwangoku I-74% yeenkampani ayinacebo lobunkokeli endaweni.
U-Edelman, u-2020 we-B2B wokuFunda ngeNzululwazi
Kule bhlog, ndiza kuvavanya iingcebiso ezintlanu eziphezulu zokwakha iqhinga lobunkokeli eliphumeleleyo:
I-Tip 1: Gxila kwinto efunwa ngabachaphazelekayo kwiNkampani yakho
Ingavakala njengombuzo osisiseko kodwa ubunkokeli bokucinga malunga nokubonisa ubuchwephesha benkampani yakho, endaweni yokukhuthaza abantu. Ukwenza oku ngempumelelo, kuya kufuneka ufumanise ukuba zeziphi iingxaki abaphulaphuli bakho abaza kujongana nazo kwiminyaka emithathu, emine, emihlanu ezayo. Indlela yobunkokeli yokucinga esekwe kuphando olusemgangathweni kunye nobungakanani, enika ukuqonda okucacileyo kwintengiso, iya kuqinisekisa ukuba unxibelelwano alwenziwa kwiminqweno, kodwa eyenzelwe abaphulaphuli bakho ngendlela eqhutywa yidatha yokubalisa.
Ingcebiso yesi-2: Yiba nombono ocacileyo wokuba uBunkokeli oCinga ukuba buya kuChaphazela njani ukuThengiswa kweFanele
Ngokukodwa kwimeko ye-B2B, ukuthengwa kunokuba nzima kwaye kunzima. Ubunkokeli bokucinga bunokudlala indima ebalulekileyo ekuboniseni ukuba kutheni ungoyena mntu ukhetha umsebenzi. Ngokucacileyo oku kulungelelanisa ubuncwane kuba-ngokungafaniyo nokuthengisa umxholo-ubunkokeli bokucinga abunakukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo ngokugqithileyo. Uphando lweshishini luzuza iintliziyo kunye neengqondo, ukudala isindululo sexabiso esisekwe kwizinto ezibaluleke kakhulu kubaphulaphuli bakho.
I-Tip 3: Funda ukuba yintoni eyenza ukuba uthembeke ngakumbi
Kuthatha ixesha ukufumana ukuthembeka, ngakumbi kwiimarike ezigcweleyo. Njengonxibelelwano lwedijithali yayikukuphela kwendlela yokufikelela kubaphulaphuli ngexesha lobhubhane, abantu baye bagcwala ngomxholo, kukhokelela ngokungakhathali ekudinweni. Siyakukhuthaza ukuba ujonge ukujoyina imikhosi kunye neempembelelo zeshishini ezinje ngemizimba yorhwebo, abathengi, kunye namaqabane ukuthatha umbono owabelwanayo kubunkokheli bokucinga. Oku kuyakunceda ukwakha ukuthembana kwangoko okunokuthatha iminyaka ukwakha.
Ingcebiso yesi-4: Sukuvumela isiCwangciso seQhinga lakho ukuba ukhathazwe kukudinwa
Ukuza nemixholo emitsha ngumceli mngeni omkhulu kwiinkokheli ezininzi zokucinga, kodwa ukuba usondela kuyo uzimela ngokwakho, uya kubetha udonga kwakamsinya. Iintatheli, umzekelo, azizange ziphelelwe zizinto zokuzithetha kuba zifuna into entsha eyenzekayo kwindawo yabo yobungcali. Kwaye iindaba azipheli. Cinga njengentatheli, ukubeka phambili uphando rhoqo nokuzisa amagqabantshintshi amatsha kunye nokuqonda kwiingxoxo 'zeendaba' ezibalulekileyo kubachaphazelekayo.
Ingcebiso 5: Ubunyani abunakubekwa
Ngamafutshane: bonisa abaphulaphuli bakho ukuba ukuyo ixesha elide. Ubunkokeli bokucinga abukho ngokubonisa wonke umntu ukuba ulumke kangakanani kwaye uphumelele kangakanani. Ayisiyiyo malunga nokuhlelwa ngenxa yayo nokuba. Ubunkokeli bokucinga bumalunga nokubonisa ubuchwephesha kunye nokubonisa ukuba ujikeleze ukusombulula iingxaki namhlanje nakwikamva. Qiniseka ukuba imixholo yemixholo, ithoni yelizwi kunye namanqaku edatha ayinyani kwaye ayimele ngokwenyani into oyimeleyo.
Ngexesha lonxibelelwano oluninzi, akukaze kubaluleke ngakumbi ekuphuhliseni indlela yobunkokheli yokucinga ethembekileyo kwinkampani yakho, yongeza ixabiso kubathengi kunye nokusika ingxolo. I-2021 inokuba ngunyaka wakho wokunyuka kwaye uviwe.
tags: ukuthembekaukudinwa umxholounxibelelwano lwedijithaliubunkokheliomnichannelubunkokeli bokucingaumbono
UGurpreet Purewal ngu-Sekela-Mongameli oDibeneyo woPhuhliso lwezoShishino kwi-iResearch, iingcali zobunkokeli obukhokelayo.
Ukuthengisa ngevumba: Izibalo, iNzululwazi yeOlfactory, kunye neShishini
I-Poptin: IiPopps eziSmart, iiFomu eziMiselweyo kunye neeMpendulo ezizenzekelayo